Ebusuku isibhakabhaka ... Izinkanyezi ... umbukwane othakazelisayo! Bright umlaza ... Ukumema ukubukeka Milky Way ... Bangaki zezulu? Ngokuthakazelisayo, kukhona okungenani eyodwa umuntu, ngomdlandla nangokuthuthumela ofuna ukuphumela obala ubuka ukukhanya ebusuku, ngeke zibuze lo mbuzo? Futhi, mhlawumbe, abanye ngisho wazama ukuzibala ...
Ingabe uyazi ukuthi ubani uqale watshela izwe bangaki zezulu? kuye kwaba isikhathi esingakanani?
Mayelana ezimbili namakhulu nengxenye edlule, isazi sezinkanyezi lasendulo Hipparchus kwase ihlanganiswe inkanyezi ikhathalogi kuqala. Yini eyenza usosayensi umbono ukugubha izinkanyezi? Mhlawumbe, wamhlaba umxhwele ukuthi siye sabona kwavela, inkanyezi entsha eliqhakaze ngempela. umcimbi obaluleke kangaka ngokuba izazi zezinkanyezi zazikwazi Ungashiyi i isinyathelo. Hipparchus wanquma ebamba zonke izinkanyezi azibonayo ukuze, ngakho ungaphuthelwa ukuvela izinkanyezi ezintsha, uma kwenzeka. Ngenxa yalokho, isazi sezinkanyezi yashintsha e 1025 izinkanyezi. Ngayinye Ukudidiyela value futhi babezimisele.
Yiqiniso, okwashiwo waqala nokuqhuba ngisemncane kakhulu. Ngo izazi zezinkanyezi zasendulo kwaba futhi imisebenzi yakhe, kodwa, ngeshwa, sezwa okusanhlamvu kwabo ezincane kuphela. Ngakho-ke, ikhathalogu lokuqala izinkanyezi ubhekwa umphumela Hipparchus. Bonke abangu izigaba eziyisithupha. The main Ukukhetha umbandela kwaba ukukhanya. Ngesikhathi esifanayo, lo mqondo "ezidlula". Yiqiniso, Gipparhova ukubaluleka kushintshile futhi babe elicwengiwe.
Endulo kukholakala ukuthi kusukela izindikimba zasezulwini zitholakala endaweni eyodwa, bese isuswa emhlabeni ngesikhathi esisodwa (okufanayo) ibanga. Izinkanyezi, zibonakala zibuthuntu kakhulu futhi neze okuqaphelekayo, ukubaluleka lesithupha okunikezwe, futhi bhá - ngowokuqala. Esikhathini ikhathalogu, ihlanganiswe ngu Hipparchus, kwasekuqaleni ebaluleke kakhulu kwakuyisimo izinkanyezi 15 ngosuku lwesibili - 45 - eyesithathu 208, owesine - 474, ngosuku lwesihlanu - 217, ku lesithupha - 49 (kanye mafu ambalwa).
sekudlule isikhathi. Kwakukhona izinkanyezi emisha ivela isipiliyoni, ulwazi zanqwabelana. Ngokushesha, izazi zezinkanyezi ziye zathola ukuthi emisebeni izinkanyezi engalingani, zinjalo at amabanga ehlukene. Kukhona definition esisha namagugu abo: ezibukwayo, photovisual, enezithombe, bolometric.
Mhlawumbe umbuzo ngokuqondene nendlela izinkanyezi eziningi esibhakabhakeni, ngeke ukuphendula ngisho ukufunda izinkanyezi onegunya kunabo yesimanje. Futhi lokhu kuyaqondakala. Akukona uvumelana zo lasendulo abathi ubale izinkanyezi njengoba kunzima ukubiza inani nangangesihlabathi esisogwini Earth! Kodwa lapha singase siyekethise kahle ukulinganisa anolaka.
Yini okudingeka siyenze ukuze ubale inani zesihlabathi? idatha ugu endaweni (zingatholakala kusukela satellite) kanye ukushuba isilinganiso ungqimba isihlabathi. Lokhu kuzosiza ukunquma inani isihlabathi ezweni lonke (VZ). Manje esilinganisweni kuzohlale uhlamvu lwenhlabathi (VP). Wena ukubamba? Ukuze inombolo eyiyona zesihlabathi ngeke kuphela ukwenza isenzo esisodwa - uhlukanise VZ ku VP. Yiqiniso, lesi sibalo kuyoba "anolaka", kodwa noma kunjalo ...
Ngaphansi kohlelo lwe-efanayo, singakwazi cishe ukunquma izinkanyezi eziningi kanjani isibhakabhaka. Isimiso kuyafana, esikhundleni kuphela amabhishi - galaxy. Sikholelwa. Ngo-Galaxy yethu mayelana 10 12 izinkanyezi. Futhi ukuthi singakanani isikhathi sabo endaweni yonke? Sikunikeza ubumnandi ukuphendula umbuzo yena, enika mfana omncane: imithala, mayelana efanayo - 12 Okthoba.
Ungasebenzisa kuphela wande.
Qamba izinkanyezi esibhakabhakeni
Izinkanyiso evelele kunazo zonke lwesintu banikeza amagama ezinkulungwaneni zeminyaka edlule. Lokhu Sirius futhi Vega, futhi Aldebaran futhi Antares, nabanye abaningi. Labo izinkanyezi kabani ukukhanya kancane buthaka, okhonjiswe incwadi zamagama zesiGreki izinombolo. Ezinye zazo asamukelanga ngisho izinombolo. Bamane irekhodwe ku amabalazwe, elisho umphumela izixhumanisi kanye ecacisa isicwebezelisi (ukukhanya).
Inkanyezi bhá endaweni yonke kubhekwa blue UW AGR. Emkhathizwe ebonakalayo ehamba phambili Deneb, of the closest kithi - Sirius ku-Solar System - Venus.
Didactics ekufundiseni - Iyini?